Nobody reviewed this site yet, be the first to tell everyone what you like about burmeseclassic.com.
BETA We evaluate the latest social media signals (about burmeseclassic.com)from Twitter, Facebook and Google+ to get an idea about the public opinion.
naing lynnsoe | Jul 14, 2012 - 15:21
မြန်မာစာတန်းထိုး နိုင်ငံခြားကားတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ naing lynnsoe | Jul 14, 2012 - 15:23
နတ်သားလေး နေလှိုင်း | Apr 10, 2012 - 08:22
အင်္ဂလိပ်လို ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကို သိချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်
If you want to know about Buddhism you will... San Min | Jan 11, 2013 - 03:08
BurmeseClassic Games' Room Edmund Gwi | Aug 08, 2012 - 05:28
Yangon Tha & Madalay Thu (A Burmese Classic Song) Webmaster BC | Jun 29, 2012 - 08:23
BurmeseClassic ဂီတသင်ခန်းစာများ မကြာမှီစတင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ Facebook Buzz
Phyo Lay Phyo Lay | Mar 28, 2014 - 06:40
burmeseclassic.com/img/cartoon/HT1224.gif ဘဒ္ဒန္တ တိက္ခဥာဏာလင်္ကာရ | Jan 20, 2014 - 13:51
burmeseclassic.com မှ အမေရိကန်ဆရာတော် အရှင်ကေလာသတို့ ရဲ့ အဖြေတွေကို တင်ဖို့ ပဲ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ မိမိ မုန်း | Feb 25, 2014 - 07:06
တပြည်သူမရွှေထား ရုပ်ရှင်ကို Burmeseclassic က တင်ထားလို့ ကြည့်ဖြစ်တယ် Yiyi Aye Kline | Nov 24, 2013 - 23:57
ဒီနေ့ ဖေဖေကို အငြိမ့်ဟာသ ကြည့်ခိုင်းပါတယ်၊ RFA အပြီးမှာ burmeseclassic.com မှ တင်ထားသော မေတ္တာေ၇ွှစင်အငြိမ့်ဟာသ ကိုကျမဖွင့်ပေးပြီး လူ၇ွှင်တော်များ၏ ဟာသအချို့နဲ့ ဖေဖေရဲ့ မပြုံးမစ မျက်နှာနဲ့ ဒီကောင်တွေ ထောင်ကြတော့မှာဘဲလို့ စိတ်ပူနေတဲ့ ဖေဖေကို1 ... Noe Noe Kay Khine | Nov 15, 2013 - 04:24
burmeseclassic.com/ mhar baydin may lo ya tal .. :) Pho Ye | Sep 11, 2013 - 12:15
ဟေးးးးးးးးးးးးး နဂါးနိုင်ဓါးကြည့်လို့ရပီကွ burmeseclassic.com/choice_player.php?index=Njk5OA==&d=aW1nL21vdmllLzY5OTguZ2lm&s=6&p=1&tp=2 0n Air စာအုပ်၊စာပေ၊ဟာသ၊ကဗျာ၊နှင့်အခြားသောအရာများ | Sep 08, 2013 - 20:07
( စာအုပ်ရှာလိုလျှင် မာတိကာ is.gd/hluLVT မှာရှာပါ။ Download အခက်အခဲရှိလျှင် is.gd/kNYDuN မှာဖတ်ပါ။) credit to burmeseclassic.com By Nyi Thit ... Yuzana Saing | Aug 31, 2013 - 14:56
burmeseclassic.com/type1.php?index=MTI2NzA=&d=aW1nL21vdmllLzEyNjcwLmdpZg==&s=1&p=1&tp=2 Phola Pyae | Jul 14, 2013 - 06:42
မြခြူသံ တွံတေးသိန်းတန် မာမာအေး မြတ်လေး burmeseclassic.com/old_player.php?index=NTczNw==&d=aW1nL21vdmllLzU3MzcuZ2lm&s=9&p=1&tp=2 Khin Myint | Jul 07, 2013 - 04:36
burmeseclassic.com/flvplayer1.php?id=S0267&s=1&tc=11 Hlaing Bwa | Jul 04, 2013 - 02:34
အဆိုပါရုပ်ရှင်ကို burmeseclassic.com တွင်ပြန်လည် တင်ထားပါကြောင်း ... Soe Win | May 15, 2013 - 04:11
မေတ္တာပို့သီချင်းများနားထောင်ချင်၇င် burmeseclassic.com/flvplayer1.php?id=S0426&s=2&tc=10 Pho Thar | May 14, 2013 - 23:50
burmeseclassic.com/type1.php?index=NTcxNw==&d=aW1nL21vdmllLzU3MTcuZ2lm&s=9&p=1&tp=1 Khin Maung Maung | May 14, 2013 - 08:04
burmeseclassic.com/choice_player.php?index=NzA2OQ==&d=aW1nL21vdmllLzcwNjkuZ2lm&s=9&p=1&tp=2 အသစ်ကလေးတွေ။ မဆိုးဘူး။ Angel Mang | May 09, 2013 - 07:16
burmeseclassic.com/type1.php?index=MTI1MzY=&d=aW1nL21vdmllLzEyNTM2LmdpZg==&s=6&p=1&tp=2 Black Orchid | May 08, 2013 - 14:32
ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆို..Burmeseclassic.com မှာ မြန်မာကားတွေပဲ ကြည့်တော့မယ်.....:P ကိုညီ သုတ | May 07, 2013 - 07:08
သရုပ်ဆောင် = နေတိုး = နေဆန်း = စိုးမြတ်သူဇာ = ရွှေမှုံရတီ burmeseclassic.com/old_player.php?index=MTI0Mjk=&d=aW1nL21vdmllLzEyNDI5LmdpZg==&s=1&p=1&tp=2 Thet Mon Myint | Mar 18, 2013 - 12:50
မသက်မွန်ရဲ့အဝေးရောက်ပရိသတ်များ Shwevideo နဲ့ Burmeseclassic တို့မှာကြည့်ရှုနိုင်ကြပါပြီရှင် Esther Sian Sb | Mar 11, 2013 - 17:28
GEEE... myint myat is sooo hot >.< nice movie tho burmeseclassic.com/type2.php?index=MTI0Mzc=&s=9&p=1&tp=2&d=aW1nL21vdmllLzEyNDM3LmdpZg== Myanaung Thar | Mar 09, 2013 - 21:10
ခုခေတ်အင်တာနက်သုံးနေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ အသိပညာဗဟုသုတအဖြစ် ကြည့်သင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ >> burmeseclassic.com/choice_player.php?index=MTI0MTQ=&d=aW1nL21vdmllLzEyNDE0LmdpZg==&s=9&p=1&tp=2 ... Zaw Lay | Mar 06, 2013 - 08:30
burmeseclassic.com/type3.php?index=MTI0MTQ=&s=9&p=1&tp=2&d=aW1nL21vdmllLzEyNDE0LmdpZg== Ngealngeal Nawdang | Mar 05, 2013 - 03:24
burmeseclassic.com/music_traning.php?type=CC Soe Thiha | Mar 01, 2013 - 03:11
လေးစားပါတယ် ကိုမင်းလူ ဒီ page မှာဒေါင်းလို့ရတယ်သယ်ရင်တို့Saw Han Nyunt | Feb 26, 2013 - 06:08
burmeseclassic.com မှရပါသည်။ ဒေါင်းလော့လင့်အတွက်ကူညီပေးသော ညီငယ် မောင်စေတနာကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Sengzet Fanly | Feb 25, 2013 - 10:26
burmeseclassic.com/religiousbook.php dhammapannkhinn.blogspot.com/ myakyunthar.com/ dhammabank.com/ Min Min | Feb 25, 2013 - 05:31
burmeseclassic.com/dammaQA.php?status=go&pno=3 မြန်မာ စာအုပ်များ | Feb 25, 2013 - 04:34
1. mmcybermedia.com 3. mmcpcommunity.net 4. shanyoma.org/ 5. Khin Maung Maung | Feb 13, 2013 - 20:00
burmeseclassic.com/old_player.php?index=NTcxMA==&s=9&p=1&tp=2&d= တကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ ဝင်းဉီး ၊ ချိုပြုံး ၊ တင်တင်မြ Twitter Buzz
BurmeseClassic | Mar 28, 2014 - 05:41
ဆည်းဆာသစ်ပင် :: Movie Review BurmeseClassic | Mar 27, 2014 - 05:08
အေးရာအေးကြောင်း :: Movie Review BurmeseClassic | Mar 27, 2014 - 05:07
လျှော့ကြိုးကုန်ချိန် :: Movie Review BurmeseClassic | Mar 24, 2014 - 04:24
သောကြာကြယ်ကတဲ့ရထား:: Movie Review BurmeseClassic | Mar 24, 2014 - 04:11
စိတ်အိုင်ပက်သူ :: Movie Review BurmeseClassic | Mar 24, 2014 - 04:09
ခမည်းခမက် FC :: Movie Review BurmeseClassic | Jan 23, 2014 - 12:04
မန္တလေးက ရှေးခေတ်ရွှေကျောင်းတော် BurmeseClassic | Feb 25, 2014 - 12:08
ဖိုးချစ်၏မွေးနေ့အလှူ ဇာတ်သဘင်ကြီး (၂၀၁၄) BurmeseClassic | Feb 25, 2014 - 08:43
ဂျူးမကလေးအီဗာ (လင်းယုန်မောင်မောင်) BurmeseClassic | Feb 25, 2014 - 08:40
လမင်းနှင့် နေမင်းတလလှည့်စီကျီးစိုးသောကမ္ဘာ (မယ်ခိုင်) BurmeseClassic | Feb 25, 2014 - 08:31
အလောင်းတော်ကဿပသမိုင်းနှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ (သလ္လာကိုလေးကြည်) BurmeseClassic | Feb 25, 2014 - 05:15
ထွီ (နေထက်လင်း၊ မျိုးစန္ဒီကျော်) BurmeseClassic | Feb 25, 2014 - 05:11
အိုင်တောသူ ယူမြို့သား (နေမင်း၊ ချစ်သုဝေ) BurmeseClassic | Feb 25, 2014 - 05:09
ကတိစကား (မြင့်မြတ်၊ နဝရတ်) BurmeseClassic | Feb 25, 2014 - 04:57
ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးအား သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်တစ်ဦးနှင့် မိသားစုက ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့မှု ဖြစ်စဉ်အပေါ်... BurmeseClassic | Feb 25, 2014 - 04:55
ဆီးဂိမ်းစ်အပြီး ခရီးသွားများမလာ၍ နေပြည်တော်ဇုန်၌ နိုင်ငံခြားသားများအား တစ်ရက်တာအခမဲ့ တည်းခိုခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး... BurmeseClassic | Feb 25, 2014 - 04:52
ကျောက်ဖြူ-ရွှေလီ ကားလမ်းမကြီးဖောက်လုပ်ရန် ဒေါ်လာနှစ်ဘီလျံ အတိုးဖြင့်ချေးမည်ဟု တရုတ်က မက်လုံးပေး ကမ်းလှမ်း BurmeseClassic | Feb 25, 2014 - 04:46
Bad Bird Game ငှက်ကလေးတွေကို လွတ်အောင်လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေသုံးပြီး ကယ်တင်ပေးရမယ့်ဂိမ်းလေးပါ BurmeseClassic | Feb 25, 2014 - 04:37
Hopagon Game လေးထောင့်တုံးလေးတွေကို ဆူးတွေဗုံးတွေနဲ့မထိအောင် ခုန်ပြီးပန်းတိုင်ရောက်အောင်သွားရမယ့် ဂိမ်းလေးပါ BurmeseClassic | Feb 25, 2014 - 03:33
ချဲလ်ဆီးနှင့်ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမတိုင်မီ ဂါလာတာစာရေးပရိသတ်များ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ BurmeseClassic | Feb 24, 2014 - 11:53
မှော်ပူဖောင်းတစ်လုံးဝယ်ခဲ့သူ (သူဝေး) BurmeseClassic | Feb 24, 2014 - 11:49
ကုမ္ဘာဏ်တစ်ထောင် (မင်းမြတ်သူရ) BurmeseClassic | Feb 24, 2014 - 11:47
နဂါးပျံမာန်စွယ် (တြိစက္က) BurmeseClassic | Feb 24, 2014 - 08:27
ထိုင်းရောက် ဗီဇာသက်တမ်းကုန် မြန်မာလုပ်သား ၇၀ ကျော် အလုပ်ဖြုတ်ခံရ BurmeseClassic | Feb 24, 2014 - 08:26
ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို အစိုးရထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး စတင်တွေ့ရှိသူအား ဖမ်းဆီးမထားဟုဆို BurmeseClassic | Feb 24, 2014 - 08:25
ဘုန်းကြီးကျောင်းကို နွားလှည်း ၃၂ စီးဖြင့် ပုံစံမပျက် ရွှေ့ BurmeseClassic | Feb 24, 2014 - 08:24
ဥရောပတွင် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားရေး မြန်မာဗုဒ္ဓစင်တာကို လန်ဒန်တွင် ယခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း တည်ဆောက်မည် BurmeseClassic | Feb 24, 2014 - 08:09
နှစ်ပေါင်း(၇၀)ကြာမှ ဥစ္စာရင်းမှန် ပြန်ရခဲ့သည့် စစ်တွင်းက 'ဦးထုပ်လေး' BurmeseClassic | Feb 24, 2014 - 06:29
တပြည်သူမရွှေထား (ကျော်သူ၊ မေသန်းနု) Add the Webutation certificate to your website
window.domain = 'burmeseclassic.com';
<a id="webutation-link" href="http://www.webutations.org/go/review/burmeseclassic.com">burmeseclassic.com Webutation</a>
<a id="webutation-pixelbadge-link" href="http://www.webutations.org/go/review/burmeseclassic.com">burmeseclassic.com Webutation</a>
Status of burmeseclassic.com
Last checked on Apr 12, 2014 - 13:25 Website Ping Test: burmeseclassic.com down?
© Webutation 2014 - burmeseclassic.com